Tadiavo ny sainay - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Finday ny muse
Amin'ny angano grika, andona dia andriamanitra nanentana ny olona amin'ny literatiora, zavakanto ary siansa. Noho ny tantaran'ny mozika sivy, dia nijery azy ireo hatrany ny olona ary nanantena fanampiana tamin'ny asany namorona. Amin'izao andro ankehitriny izao, ny mpanoratra anglisy britanika Robert Graves dia nanoratra tantara foronina momba ny angano sy ny fananganana hozatra malaza amin'ny maty. Ireo mpanoratra, mpihira ary mpandihy dia niantso ny Muses ho fanampiana sy aingam-panahy. Mampisalasala raha misy tena mino ny andriamanibavy grika. Na izany aza, mpanakanto sy olona malaza maro no mahita azy ireo ho toy ny mozika.
Avy aiza ny fientanam-panahy?
Ny tena dikan'ny teny aingam-panahy dia midika hoe mifoka rivotra na mitsoka amin'ny zavatra iray, Ny fanahy masina na mahery iray dia manome hevitra na fahamarinana ary mamofona na mitsoka azy ao anaty olona iray. Rehefa miresaka momba ny aingam-panahy ny kristiana dia mino izy ireo fa nahazo hevitra na hevitra iray avy amin'Andriamanitra. Avy eo izy ireo dia mihevitra fa ny fanoratana sy ny fiteniny no aingam-panahy avy amin'Andriamanitra ary mitarika azy amin'ny hevitra sy ny fahaizany Izy.
Satria avy amin'Andriamanitra ny famoronana, dia azo antsoina hoe muse ho antsika Izy. Ny Fanahy Masina no mitarika sy mitari-dalana ary manentana antsika. Manala antsika amin’ny fahadisoantsika Izy ary mitarika antsika ho amin’ny fahamarinan’i Jesosy izay fiainana sy fahamarinana ary lalana. Raha tsy nanome fofonaina ny Ray ho antsika Izy, dia ho tsy manana aina isika. Mamelona antsika amin’ny heriny Izy ary mameno antsika amin’ny famirapiratan’ny haren’ny eritreriny.Ny asa famoronana dia ampahany amin’Andriamanitra mihitsy no nomeny antsika mba hanampiana antsika amin’ny fiainana sy hanatsara ny fiainantsika. Anisan’ny fiainana be dia be izay ananantsika ao amin’ny Jaona izany 10,10 dia nampanantenaina. Ny fahaizantsika mamorona dia mamela antsika hanao zavatra maro izay tsy ilaina fotsiny, toy ny fanorenana trano sy milina, fa manome antsika ny zavakanto ihany koa. Ny faniriana, angamba na ny faniriana hamorona aza, dia miorim-paka lalina ao anatintsika ary ny maotera ao ambadiky ny ankamaroan'ny hetsika ataontsika.
Ahoana no ahafahantsika mamela an'Andriamanitra ho lasa mozika izay manome antsika ny fitarihana sy fitaomam-panahy ilaintsika sy ny faniriantsika? Afaka nanomboka nanao vavaka fihainoana vavaka izahay. Ny ankamaroan'ny olona dia mahazatra amin'ny fombavam-bavaka mahazatra: miresaka amin'Andriamanitra, mamaritra ny olantsika sy ny olantsika, misaotra sy manome voninahitra azy, mivavaka ho an'ny olon-kafa ary mizara ny saintsika fotsiny. Ny fihainoana vavaka dia mitaky famerenany bebe kokoa satria mitaky fahanginana. Sarotra ny hangina mandritra ny vavaka satria tsapantsika matetika fa ilaina ny milaza zavatra. Mety tsy mahazo aina ny fanginana: mihetsika amin'ny lalana hafa ny eritrerintsika, variana isika ary satria tsy maheno ny feon'Andriamanitra amin'ny feo mahery isika dia mihevitra fa tsy mifandray amintsika izy.
Ny hoe mangina eo anatrehan'Andriamanitra mandritra ny vavaka dia mitaky fotoana sy fampiharana. Ho fanombohana dia afaka mamaky andinin-teny iray avy ao amin'ny Baiboly na boky debosialy ianao ary avy eo mifantoka amin'Andriamanitra sy mangataka azy hitarika sy hitarika ny hevitrao manokana. Rehefa mahatsapa ny fanirianao hiteny ianao dia tsarovy fa te hihaino ianao fa tsy hiteny. Dallas Willard dia nanoratra boky manaitaitra antsoina hoe Hearing God izay manazava amin'ny an-tsipiriany ny fomba handrenesana. Mazava ho azy fa Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny muse ary afaka ary tokony hijery azy isika rehefa mitady fitaomam-panahy sy fitarihana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Izy dia vonona kokoa ho mpitari-dalana antsika ary miteny foana sy mamelona ny fitiavana sy ny fahendrena ao amintsika. Enga anie isika rehetra hianatra hihaino ny feony feno fitiavana bebe kokoa sy mazava.